TI-IM sy ny AVG: “Mila sazina ireo mpanao trafika andramena” | NewsMada
TI-IM sy ny AVG: “Mila sazina ireo mpanao trafika andramena”
Maro ny fitakiana ny hanasaziana ireo mpanao trafika andramena eto amintsika, saingy tsy misy ny vokatra azo tsapain-tanana. Manamafy izany ny Transparency International-Initiative Madagasikara (TI-IM) sy ny Alliance voahary gasy (AVG).
Namoaka tatitra mikasika ny andramena ny fikambanana iraisam-pirenena Transparency International-Initiative Madagasikara (TI-IM) sy ny vovonana fiarahamonim-pirenena Alliance voahary gasy (AVG). Tatitra avy amin’ny angom-baovao sy fanadihadiana lalina, nataon’ny mpanao gazety, avy amin’ny Tetikasa fitoriana kolikoly sy heloka bevava (OCCRP).
Nanomboka ny taona 2007 ny fanondranana andramena nankany ivelany avy aty Madagasikara ary tena nirongatra nanomboka ny taona 2009 hatramin’ny taona 2016. Noho ny sazy navoakan’ny Rafitra iraisam-pirenena mitantana ny varotra biby na zavamaniry ahina ho lany tamingana (Cites), voarara ny fanondranana andramena, nanomboka ny taona 2013, saingy nitohy foana ny trafika. Ho an’ny Cites, “andrasana ny fanasaziana ireo tompon’antoka amin’ny trafika andramena”, vao mety hivaha io sazy io.
Nitady hirika hivarotana ny mpitondra
Nisy ny tsikomba iraisan’ny mpandraharaha mpanondrana, ny tompon’andraikitra malagasy ary ireo “mafia” mpandray ny andramena. Firenena tena mandray azy (80%) ny any Sina, ampandalovina any Azia, toa an’i Hong Kong sy i Singapour, ohatra. Tsara kokoa ny andramena lena avy any atiala miohatra amin’ny tahiry efa maina. Hanaovana fanaka lafovidy ka mitentina 1 tapitrisa dolara ny fandriana iray.
Anisan’ny nahavita fanadihadiana lalina sady nahavita horonantsary (2011) koa i Alexander Von Bismak, sady tale mpanatanteraky ny fikambanana Sampam-pitsikilovana mikasika ny tontolo iainana, ny Environmenal Investigation Agency (EIA). Nambarany fa “na teo aza ny fanairana nataon’ny sehatra maro, toy ny teknisianina vahiny, ny mponina eny ifotony, ny fiarahamonim-pirenena (OSC), ny masoivoho vahiny, sns, nitady hirika hivarotana ny tahiry andramena hatrany ny fitondrana malagasy”. Nanamafy izany ny OCCRP, fa “miara-mitsikomba amin’ny mpanao trafika eto an-toerana sy ny mpividy any ivelany ny mpitondra nifandimby teto Madagasikara”.
Nilaza ny filohan’ny filakevi-pitantanan’ny AVG, Razakamanarina Ndranto, fa “manasarotra ny fahalalana ny fanondranana andramena ny fisian’ny tompon’ny sambo tafiditra ao anatin’ny tambajotran’ny mpanao trafika andramena”.
Mifandray amin’ny lavanila
Manampy izany, fomba iray hanafenana andramena ny any anatin’ny lavanila aondrana any ivelany. Firenena matetika andalovana mialoha ny ahatongavan’ny andramena any Azia atsy amin’ny Nosy Maorisy.
Antony, avy any amin’ny faritra Sava ny 70%-n’ny lavanila eto Madagasikara aondrana any ivelany, ary avy amin’iny faritra iny koa no tena miainga ny trafika andramena. Araka ny tatitry ny OCCRP, “nangataka ny Fikambanan’ny banky eto Madagasikara mba hanokatra indray ny kaontin’ny mpanondrana tsy ara-dalàna andramena any amin’ny faritra Sava ny filoha ankehitriny, … satria mety hisy vokatra mahatsiravina eo amin’ny toekaren’ny firenena raha tsy atao izany… Hazavainy fa “mpanondrana lavanila ny ankamaroan’ireo mpanondrana andramena…””.